ह’नीमुन सकिएकै दिन प्रम देउवाले किन गरे यस्तो घोषणा ? प्रचण्डको गयो सातो, अब गठबन्धनको के हुन्छ ? – GALAXY
ह’नीमुन सकिएकै दिन प्रम देउवाले किन गरे यस्तो घोषणा ? प्रचण्डको गयो सातो, अब गठबन्धनको के हुन्छ ?
सरकारको ह’नीमुनको समय पूरा भएको दिन अर्थात देउवा सरकारले सय दिन कटाएकै दिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेको घोषणाले गठबन्धन तरंगित बनेको छ । एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रम देउवाको अभिव्यक्तीपछि झस्किएका हुन् ।
ठिक सय दिन कटेकै दिन प्रधानमन्त्री देउवको बोलेको कुराले सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अब एमसीसीमा विवाद गरिराख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै तुरन्त पास गर्नु पर्ने अभिव्यक्ती दिएका छन् ।
बाहिर हल्ला गरिए जस्तो कुनै पनि प्रावधान एमसीसीमा नभएको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । देउवाले वर्तमान सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको पनि बताएका छन् ।
अब मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै समयमै तीन तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे ।प्रधानमन्त्री देउवाले खुला अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । यो सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट्याउँदै भने, “भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा रहेको छ ।”
अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा पुनर्विचार हुन्छ कि भनिराखिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, “अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन तर यसलाई विधिसम्मत गराउने र सच्चाउने प्रक्रिया यो सरकारले थालिसकेको छ ।